Epholileyo RED Apt. ecaleni kwethambeka lokutyibilika
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJanez
Umoya omtsha, imithi, ukuhambahamba okubukekayo, kunye nokulala kwindlwana enomtsalane engqongwe yindalo inokusetha ubuchopho bakho kwakhona kuba akukho nto inokuyenza. Ukuba ujonge ukubaleka ubunyani kwaye uphinde uqhagamshelane nendalo, le yeyona ndawo ikufaneleyo. Apha kwindalo yonke imihla ivakala njengeCawe. Ifakwe kumbindi weRibniško Pohorje, ilali entle etsala abakhweli, abakhweli beebhayisekile, abafuna iadrenaline kunye nabathandi boxolo, yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela kwiveki epholileyo okanye iholide yosapho.
Indlu yonke inamagumbi ama-4 azimeleyo. Elakho li-APARTMENT ELIBOMVU (57m2 enkulu) elikumgangatho osezantsi. Inegumbi elinye elinobubi obuphindiweyo, indawo eqhelekileyo, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi labantwana elinebhedi enkulu. Indlu ine-terrace eyi-30m2 enkulu, apho unokuphumla khona imini yakho.
Indlu inendawo efanayo yokuzonwabisa okanye imibhiyozo. Apho unokufumana isitovu esihle somthi esenza indawo ibe nomoya omnandi. Ngexesha lasebusika, inika ubushushu obuhle.
Ngokwemfuno yakho, unako ukufikelela kwiwasha kunye nesomisi kwindawo efanayo ukuba ufuna ukuhlanjwa kwempahla (intlawulo eyongezelelweyo!). Intsimbi ikwabonelelwa. Kubonelelwe ngezinto ezibalulekileyo ezibandakanya iindawo zokulala ezicocekileyo, iitawuli ezintsha, izinto zokuhlambela, nokunye.
Ukuhlehla kwihlabathi lokwenyani ukuya kwindawo ekhuselekileyo yendalo engekachukunyiswa. Yiza uchithe iholide yakho elandelayo nathi! Incwadi namhlanje!
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, 1 iisofa eziyi-
Ngokungxama kunye nokutyumza kobomi banamhlanje, izinto ezinqabileyo zezona zinto sizixabisa kakhulu, njengesithuba, ukuzola kunye nexesha. Isithuba sokuphefumla, ixesha lokuphupha… ungabufumana obu butyebi apha eRibniško Pohorje.
Ubumelwane bunobubele ngokupheleleyo. Ukuba ungathanda ukuhlala njengomntu wasekhaya, yiza uhlale kwindawo yethu. Uya kuba nethuba lokungcamla iPohorje cuisine ngendlela ethile ngamafama asekhaya. Ngcamla isonka esenziwe ekhaya, ubisi, kunye neemveliso zasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Janez
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha (ubuqu okanye ngomnxeba). Ndilapha ukunceda nangayiphi na indlela, ndiya kuba nentlalontle njengoko ufuna ukuba ndibe njalo kwaye ndikuxelele onke amabali asekhaya ukuba uyafuna ukuba ndenze njalo, okanye ndikushiye ubumfihlo buphelele; konke kuxhomekeke kwisigqibo sakho.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam nangaliphi na ixesha (ubuqu okanye ngomnxeba). Ndilapha ukunceda nangayiphi na indlela, ndiya kuba nentlalontle njengoko ufuna ukuba ndibe njal…